Home Wararka RW Kheyre iyo Gud. Baarlabaanka oo diiday ilaalada ciidanka AMISOM, Sababta?
RW Kheyre iyo Gud. Baarlabaanka oo diiday ilaalada ciidanka AMISOM, Sababta?
Sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xafiisyada RW Xasan Cali Kheyre iyo Guddoomiyaha Baarlabaanka, waxaa ay labada masuul warqad u direen Taliska AMISOM iyagoo ku amray in ciidamada Uganda ee ilaalada u ah RW Kheyre iyo Gud. Baarlabaanka laga kaaftoomay marka ay labada masuul bannaanka uga baxayaan xafiisyadooda iyo guryahooda.
Masuuliyiinta ayaa codsaday in ilaalada ciidanka Uganda ay ku ekeedaan oo kaliya sugidda amniga guryaha iyo xafiisyada Ra’isul Wasaaraha iyo Gud. Baarlabaanka sida MOL loo sheegay.
RW Kheyre aya la filayaa in horraanta sanadka ay amniga Madaxtooyada ay la wareegaan 350 ka tirsan ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Eriteriya. Ciidankan aya waxa bixinaya dhaqaalaha ku baxaya dowladda Qatar sida MOL ay ogaatay.
Arrintan aya waxa ay ka dhex abuurtay Taliska AMISOM gaar ahaan ciidana Uganda caro badan waxaana lagu wadaa in horraanta bisha Disember ay shir isugu yimaadaan wadamada ay ciidanka ka joogaan Soomaaliya shirkaas oo lagu qaban doono magaalada Kampala.
Itoobiya aya bishii Luulyo ee sanadkan codsatay in lagu soo daro ciidanka Eriteriya in ay ka mid noqdaan ciidamada Taliska AMISOM ee ka howl gala Soomaaliya. Ururka Midowga Afrika & IGAD aya ogolaaday codsigaas, balse waxaa ka biyo diiday Qaramada Midoobay taasoo qiil ugu dhigtay in aanan dhaqaale loo hayn, dowladda Qatar aya horraantii bisha Oktobar kafaala qaaday in ay bixin doonto dhaqaalaha ku baxaya ciidanka Eriteriya.
Qaramada Midoobay aya weli aanan gaarin go’aan, balse RW Xasan Cali Kheyre & MW Farmaajo aya ku rajo weyn in ay ogolaan doonaan Qaramada midoobay ka mid noqoshada Taliska AMISOM.
Ciidanka Eriteriya ee loo soo wado iyo kuwa ay ku tababarayaan dalkooda aya waxaa walaac xoog leh ka muujiyada hoggaanka xisbiyada mucaaradka ah.
Waxaa hubaal ah in haddii aay ciidanka Eriteriya loo ogolaado in ay yimaadaan Soomaaliya dhici doono kacdoon shacab kaasoo la mid ah kii ay 2006 iyo 2007 ay sameeyeen shacabka Muqdisho markii uu AUN MW Cabdullaahi Yusuf ogolaaday in ciidanka Itoobiya ay yimaadaan magaalada Muqdisho.